एक कराेड नाककाे मुल्य ताेकिएका प्रत्रकारकाे प्रश्न : किन मेराे मात्र खेदाे भयाे ? (भिडियो) - Purbeli News
एक कराेड नाककाे मुल्य ताेकिएका प्रत्रकारकाे प्रश्न : किन मेराे मात्र खेदाे भयाे ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३१, २०७६ समय: २२:१८:३८
ईटहरी । सुनसरीको ईटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकलाल चौधरी र पत्रकार बिराट गौतम (अनुपम) बिचको बिवाद सामाजिक सञ्जाल मात्र नभएर देश तथा बिदेशमा सर्बत्र चर्चा र चासोको बिषय बनेको छ । केही सातायता सो विवादले एउटा नयाँ बहस मात्र सिर्जना गरेको छैन ।
देशमा सञ्चार बिधेयकको बहस चलिरहँदा घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा समेत पत्रकार र पत्रकारिताको बिरोध गर्नेको जमात बढेको छ । पत्रकार गौतमलाई ओसामा बिन लादेन जस्तै खराब पात्रका रुपमा समेत चित्रण गरिएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा अध्यायनशिल र भ्रष्टचारबिरोधी अभियानमा बिशेष कलम चलाउँदै आएका र साहित्यमा समेत दख्खल भएका गौतम सँग उनको पत्रकारिता प्रबेश र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले कतै पत्रकार र पत्रकारिता नै खराब हो की भन्ने द्धिबिधा समेत सिर्जना गरेको छ । घटनापछि गठित मिसन टोलीले समेत पत्रकारलाई नै घुमाउरो भाषामा दोषी देखाएको छ ।
सोही घटनापछि ईटहरीका मेयरको पक्षमा एउटा ठुलो जमात समेत देखिएको छ । उनले उठाएको भ्रष्टचार बिरुद्धको अभियानमा देश तथा बिदेशमा रहने नेपालीहरुले समर्थन जनाएका छन । मेयरले आवेगमा आएर पत्रकारलाई गरेको गाली र त्यसपछि उत्पन्न बिवादको शुरुवात र यो अबस्था सम्म कसरी सिर्जना भयो भन्ने बिषयमा सोही घटनामा जोडिएका पत्रकार बिराट गौतम (अनुपम) सँग हामीले घटनाको नालीबेली र पत्रकार गौतमको पत्रकारिता यात्रा र उनले उठाएका बिषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ ।